Ahoana no fahitako ny zava-bitako amin'ny fampiharana Xbox 2020? - Xbox
Tena > Xbox > Kisary fahombiazan'ny Xbox - ahoana no fomba hitondrana azy
Kisary fahombiazan'ny Xbox - ahoana no fomba hitondrana azy
Ahoana no fahitako ny zava-bitako amin'ny fampiharana Xbox 2020?
Safidio ao amin'ny menio ny lalao ataoko, safidio ny lalao ary safidio avy eozava-bita. Mifidiana tsirairayzava-bitanyJEREO NYfamaritana fohy momba ny fomba hamohana azy ireo. Azonao atao ihany koa ny manokatra ny menio ao anatin'nyXboxConsole mpanaradiafampiharanaary safidiozava-bitaho an'ny lisitry ny anao rehetrazava-bita.
Eny ary, Xbox dia nanjakazaka tamin'ny tsingerin-baovao tamin'ity herinandro ity. Nanana ny zava-drehetra izy ireo nanomboka tamin'ny baiko mialoha ka hatramin'ny fividianana Bethesda na ny Zenimaxmedia rehetra hatramin'ny fandefasana ny app Xbox Beta, izay horesahintsika ato amin'ity lahatsoratra ity. Fanampin'izay, X Cloud nandeha mivantana raha manana Game Pass Ultimate ianao.
Azo inoana fa hijery an'ity zavatra ity amin'ny lahatsoratra maromaro isika, fa amin'ity iray ity dia hijanona fotsiny amin'ny fampiharana Xbox Beta vaovao isika, izay misy amin'ny Android Amin'ny fotoana anoratana ity dia amin'ny Android ihany io. Ary koa, beta ity, mba hahafahanao mankany amin'ny Google Play Store ary misintona ireo ny tenanao ary manome ny valin-teninao, liana amin'ny hevitro koa aho ka aza hadino ny mamela ny hevitra. Na izany na tsy izany, ndao ho entina eto izany ary jereo.
Azo antoka fa be snappy kokoa. Etsy ambany no ahitanao ireo fizarana 5 samihafa amin'ny fampiharana. Eo ankavanan'ny farany, manana ny fampandrenesana lakolosy fampandrenesana ianao satria mahafinaritra satria azonao atao ny manamarina azy ireo amin'ny toerana iray ary voafafa amin'ny fitaovana hafa izy ireo, izay misy antsika eo amin'ny pejy fandraisana, ka io no ho hitanao amin'ny alàlan'ny default rehefa sokafanao.
Eo ankavanan'ny izany ny hafatrao sy ny namanao. Avy eo mazava ho azy fa fantatsika rehetra fa ny vera mampitombo dia ny karoka, ary raha mandroso lavidavitra kokoa isika dia manana ny takelaka famakiam-boky ary avy eo mazava ho azy, eo amin'ny ankavanana, ny mombamomba anao, izay manome anao fifehezana an'io koa, jereo tsirairay avy izy ireo, fa kosa hanomboka eto amin'ny takelaka fonenana. Ny zavatra voalohany hitanao dia mitsambikina indray amin'ny fatorana an'i Isaac noho ny filalaovany izany.
Somary andevoziko kely izao. Alefako ao amin'ny Twitch.tv/akascratch izany raha te hanandrana izany ianao.
Tena tsara izany. Ny mbola kely teo manana ny namana mavitrika ary misy ny hitsin-dalana ho hitanao avokoa izy rehetra. Miverena any amin'izay ahafahako mitantana ny sasany amin'ireo lalao voatanisa.
Ity koa dia hitsin-dàlana mankany amin'ny fivarotana ary apetraka amin'ny consoles-ko. Ary etsy ambany ireo misy tolo-kevitra Xbox Game Pass s hafa, inona ny malaza sy ny toa azy rehetra eo amin'ny efijery an-trano. Pejy fitsangatsanganana fotsiny.
Angamba ny sasany amin'ireny dia miova satria manantena ny hahita famintinana kely fotsiny aho na zavatra hafa, mety hitsin-dàlana sasany amin'ireo hetsika malaza ataoko. Zavatra toy izany. Tsy azoko antoka, fa eto izao izao.
Ilaina io, fa andao hihoatra ary hijery ny kiheba ara-tsosialy. Amin'izao fotoana izao dia manana ny sakaizantsika sy ny hafantsika eto amin'ny takelaka sosialy isika, afaka manoratra hafatra vaovao isika, afaka mamorona fety sy zavatra toy izany. Ohatra, rehefa manindry olona aho dia afaka mahita ny fisongadinana miseho.
Azoko atao ny mandefa hafatra. Azoko jerena ny mombamomba azy. Afaka mahita ny zavatra nilalaovan'izy ireo aho ary avy eo manana ny safidy hafa toy ny fanasana amin'ny fety azoko atao avy eto.
Ireto ny resaka ary hovahana haingana ho ahy izy ireo, tsikaritro ny fangatahana tonga tsy hita fa miverina amin'ny beta ity ka antenaiko ho ampiana amin'ny fanavaozana ho avy ity ary faly fotsiny aho manana hafatra miasa amin'ny findaiko finday fampiharana fenoina sy miasa, satria tsy mbola nisy izany tamiko. Avy eo mazava ho azy fa manana ny headset miaraka amin'ny mikrôfôna chat isika eto ary afaka manindry azy hanombohana fety iray. Manana ny safidiko aho eo anelanelan'ny kabary sy ny lahatsoratra.
hafatra fampandrenesana malware.txt
Azoko ampiana olona eto ambany ary hikaroka azy ireo aho ary tsindrio ny anarany izay manamora izany. Ny ellipses mitsangana dia ho an'ny toe-javatra fanampiny toa ny moana ny fety, manasa fotsiny tsy ho ela sns. Ny takelaka manaraka dia ny takelaka afovoany izay vera manandratra izay mety ho fantatry ny ankamaroanareo dia ny asan'ny fikarohana.
Azonao atao ny miditra ao amin'ny bara fikarohana eto ary mitady olona na lalao amin'izao fotoana izao. Ny safidy ambony indrindra dia mitaky ny olona sy ny lalao ary misy ny safidy lehibe amin'izany fikarohana izany amin'ny alàlan'ny fampisehoana azy ireo miaraka. Azonao atao koa ny manindry ny olona na ny lalao ary mijery azy ireo amin'ny ambaratonga lehibe kokoa.
Manana safidy fanampiny mitovy amin'izay azonao avy amin'ireo takelaka hafa ianao rehefa manindry. kitiho io. Zavatra tsotra tsotra eto raha hitsambikina any amin'ny tranomboky isika.
Eo ambanin'ny vakizoro Library dia manana firaketana sy fampiononana izahay izao. Hanomboka amin'ny fandraisam-peo aloha isika. Mora izany.
Azonao atao ny mahita eto fa nampakariko tao amin'ny Xbox Live ny rakipeoko. Rehefa milalao lalao aho ary mirakitra zavatra iray, na screenshot na lahatsoratra 30 segondra, rehefa ampakarina ao amin'ny Xbox Live miorina amin'ny fipetrako izany dia mahazo fampandrenesana amin'ny findaiko aho izay mampahafantatra ahy fa efa vonona ny Share. Ny fikitihana azy dia manome ahy safidy hitahiry azy mivantana amin'ny findaiko, na afaka mametaka ny bokotra 'Share' eto ambany aho ary manana Xbox eto hahazoana miditra amin'ny sakafoko.
Afaka mandefa hafatra eto ambany aho na misafidy namana iray vao tsy ela akory izay. Azoko atao koa ny manindry ny ellipsis raha te hizara safidy bebe kokoa. Hisintona ny fisie amin'ny findaiko ity ary hanome ahy safidy hizara.
Na Dropbox na hafatra mailaka na OneDrive na Twitter, amin'ny ankapobeny fampiharana izay afaka mizara haino aman-jery amin'ny telefaona findainao, dia ho hitanao eo io safidy io, eo akaikiny izay misy konsolintsika, eto no anehoana ny konsolako ary afaka mifandray aho Izaho ho azy ireo hilalao lavitra, horesahintsika ato amin'ny lahatsoratra iray hafa, afaka mitantana azy ireo koa aho, midika izany fa afaka mahita sy mahita izay napetraka aho ary manafoana ny habaka na manome antoka fa nisy zavatra nakarina. Eo ankavanan'ny farany dia misy ny sary fanaraha-maso lavitra. Manantena aho fa mipetraka ianao; Fanatsarana LEHIBE ity.
Rehefa manindry azy aho dia miverina amin'ny console farany nifandraisako. Manana safidy hifandray amin'ny console hafa aho raha tiako ho hitanao izany. Nosoratako eto ireo konsolako hafa azoko atao ny manova azy, mampiseho ahy ny toe-javatra ankehitriny.
Efa miandry ny studio-ko. Tsy mandeha izao, fa manana safidy eto aho handrehitra ny console. Ary miaraka amin'ity fahalalako fahalalana ity hoe iza marina no hofeheziko sy hahafahako mifamadika eo anelanelan'izy ireo dia traikefa tsara lavitra noho ny teo aloha.
Ary farany, nanangana console vaovao ho an'ity kiheba ity izahay. Tena ilaina izany rehefa mahazo ny Xbox vaovao ianao, na Xbox vaovao izany dia andian-tantara avy amin'ny Sor X. Mba hahafahana miditra eto ary manangana ny console mandritra ny andro fanavaozana iray ary zavatra hafa dia hahafahanao hanafainganana an'ity dingana.
Fanampin'izay, tsy mila manorata ianao vao manandrana mampiasa ny lalao kilalao lalao miaraka amin'ny mpanara-maso. Hanamora kokoa azy io ary angamba horesahintsika amin'ny lahatsoratra iray hafa izany rehefa nanangana ny Series X aho ho marin-toetra. Fa fantaro fotsiny fa eo izy ary tena hahasoa azy.
Ary farany manana ny mombamomba antsika izahay, izay hitanao eto dia mitondra ahy mivantana amin'ireo asongadiko aho. Tahaka izany ny endriny rehefa nitendry ny namako aho. Eo ambanin'ny gamertag ahy sy ny zavatra ataoko dia misy safidy iray handeha ivelan'ny Internet na hiseho amin'ny Internet ary azonao atao ny mametraka izany toe-javatra izany ary hiara-hirafaingoa amin'ny satananao amin'ny Xbox One na Series X anao koa rehefa miditra ianao.
Ity ambany ity dia misy zavatra manasongadina toa ny zavatra hitantsika teo alohan'io karazana rohy mitovy hitanao teo amin'ny pejy fandraisana io. Azoko atao ny manindry an'ireo sy mitantana azy ireo amin'ny alàlan'ny fampidinana azy ireo amin'ny console sy ny toy izany. Eto ambany eto dia manana ny bio aho ary manana ny naotin'ny mpilalao namako izay tsy hita ireo mari-pamantarana, saingy efa indroa aho no nilaza izany, heveriko fa beta io ka mety hiova ny sasany amin'ireo zavatra ireo alohan'ny hamoahana azy ireo tanteraka.
Farany, azonao atao ny manindry ny kisary gear eo an-tampony ho an'ny toe-javatra mombamomba anao, izay mitondra anao any amin'ny toerana misy anao manokana izay hitanao amin'ny tranokala sy fampiharana Microsoft hafa, ary amin'ny ankapobeny dia heveriko fa fanatsarana lehibe kokoa noho izay Efa nampiasaina teto tamin'ny iPhone sy ny Android teo aloha aho nefa tsy tao amin'ny Xbox anao ary henonao ny famoahana lalao vaovao na misy zavatra ambara amin'ny Game Pass ary tianao ho azo antoka fa misy izany rehefa mody ianao. Ity fampiharana ity dia manamora ny fanaovana izany. Mazava ho azy fa afaka mampiasa ny remote control ianao.
Milalaova amin'ny console anao miaraka amin'ny mpanara-maso toy ity, tena tiako ny Razer Kishi. Tsy tokony ho olana amin'ny fihazonana ny lozam-pifamoivoizana amin'ny lalao ankafiziko sasany na mitsambikina fotsiny mandritra ny fotoana fohy aho dia hanao an'ity lahatsoratra ity. Manantena aho fa nankafizinao izany, antenaiko fa misintona anao ianao ary mamela ny fanehoan-kevitrao sy ny zavatra rehetra eto ambany, liana aho amin'izay eritreritrareo rehetra
Fantatro fa misy zavatra tsy ampy nefa matoky aho fa hanampy amin'ny ho avy. Mbola hanolotra an'ity aho raha mila hevitra fa toa mbola ho avy ny sasany amin'ireny. Rehefa mijery ny beta voalohany aho dia heveriko fa fototra mafy orina hanorenako ny taranaka ho avy sy ny fomba itanan'ity fampiharana ity ny zava-drehetra satria ny findaiko dia elixir ny fiainana, satria azoko antoka fa ho anao rehetra koa , ka mahafinaritra ny mahita fa omena saina ny fidirana eto.
Hanao izany ho ahy aho ka hamintina an'ity izahay, misaotra anao rehetra nahita fa nankasitraka ny fanohananareo rehetra aho ary tsy afaka misaotra betsaka ry zalahy. Ho tratrariko daholo ianareo ao amin'ny lahatsoratra manaraka na hikorontana Twitter, na ahoana na ahoana. Mijanòna tsara, mifandraisa tsara ary ho hitako ny manaraka, Okay, noho izany dia nibahan-toerana ny fihodinana vaovao i Xbox tamin'ity herinandro ity, nanana ny zava-drehetra izy ireo nanomboka tamin'ny pre-order ka hatramin'ny fividianana Bethesda na ny Zenimaxmedia rehetra hatramin'ny fandefasana ny app Xbox Beta, izay horesahintsika ato amin'ity lahatsoratra ity.
Raha manana Game Pass Ultimate ianao, nandeha mivantana i X Cloud, angamba hojerentsika ao anaty lahatsoratra maromaro izany zavatra izany, fa amin'ity iray ity dia hijanona fotsiny aho miaraka amin'ny fampiharana Xbox Beta vaovao azo alaina amin'ny Android indray, ity no kinova beta hahafahanao mandeha any amin'ny magazay google play ary misintona azy ny tenanao ary manome ny hevitrao - liana amin'ny hevitro koa aho ka aza hadino ny mamela azy ao anaty ireo hevitra. Na izany na tsy izany, ndao ho entintsika eto izany ary jereo. Azo antoka fa haingana be kokoa io.
Raha mandeha eto ianao dia afaka mahita ireo faritra 5 samihafa amin'ny fampiharana. Eo ankavananao ambony dia manana ny lakolosy fampandrenesana. Ny fampifanarahana ny fampandrenesana dia mahafinaritra satria azonao atao ny manamarina azy ireo amin'ny toerana iray ary voafafa amin'ny fitaovana hafa izy ireo, koa eto izahay dia eo amin'ny efijery an-trano, ka izany no ho hitanao amin'ny alàlan'ny default anao rehefa manokatra azy ianao.
Eo ankavanan'ny izany ny hafatrao sy ny namanao, dia antsoina hoe tab sosialy. Avy eo mazava ho azy fa fantatsika rehetra fa ny vera mampitombo dia ny karoka ary avy eo, raha mandroso kokoa isika, dia manana ny takelaka famakiam-boky ary avy eo mazava ho azy eo an-kavanana ny mombamomba anao, izay manome anao fifehezana voafaritra ihany koa. Hodinihintsika tsirairay ireo, fa hanomboka eto amin'ny takelaka Home.
Ny zavatra voalohany hitanao dia mitsambikina indray amin'ny fatorana an'i Isaac noho ny filalaovany izany. Somary andevoziko kely izao. Alefako ao amin'ny Twitch.tv/akascratch izany raha te hijery izany ianao.
Tena tsara izany. Somary lavidavitra kely ianao dia manana ireo namana mavitrika ary misy làlana hitsin-dàlana hahitana azy rehetra. Hiverina any amin'izay ahafahako mitantana ny sasany amin'ireo lalao voatanisa.
Ity koa dia hitsin-dàlana mankany amin'ny fivarotana ary apetraka amin'ny consoles-ko. Ireto ambany ireto misy tolo-kevitra Xbox Game Pass hafa, inona no malaza, sy ny toa azy, rehetra eo amin'ny efijery an-trano. Pejy fitsangatsanganana fotsiny.
Angamba ny sasany amin'ireny dia miova satria antenaiko ny hahita famintinana kely fotsiny na zavatra hafa, angamba fiatoana fohy amin'ny hetsika malaza ataoko, tsy azoko antoka, fa eto izany izao. Ilaina izany, fa ndao hihoatra ary hijery ny kiheba ara-tsosialy. Amin'izao fotoana izao, eto amin'ny takelaka sosialy, manana ny sakaizantsika sy ny hafatray izahay.
Afaka mamorona hafatra vaovao isika. Afaka mamorona fety sy zavatra toy izany isika. Raha izaho ohatra dia tsindrio olona iray dia azonao atao ny miseho ny fisongadinan'izy ireo.
Afaka mandefa hafatra aho. Azoko jerena ny mombamomba azy ireo. Afaka mahita ny zavatra nilalaovan'izy ireo aho ary avy eo manana ny safidy hafa toy ny manasa amin'ny fety iray azoko atao avy eto.
Tonga eto ny resaka ary mavesatra haingana amiko izy ireo. Tsikaritro fa tsy hita ireo fangatahana tonga, saingy miverina amin'ny beta ity, antenaiko fa ho ampiana amin'ny fanavaozana amin'ny ho avy io. Amin'izao fotoana izao dia faly fotsiny aho momba ny hafatra miasa mandritra ny famoahana sy ny fiasana amin'ny findaiko, satria tsy mbola nisy izany tamiko.
Avy eo mazava ho azy fa manana headset miaraka amin'ny mikrôfônin'ny chat eto isika ary afaka manindry azy io hanombohana fety iray. Manana ny safidiko aho eo anelanelan'ny feo sy ny lahatsoratra, azonao atao ny manampy olona sy mikaroka azy ireo eto ary tsindrio ny anarany izay manamora izany. Ny ellipses mitsangana dia ho an'ny toe-javatra fanampiny toa ny moana ny fety, manasa tsy ho ela, sns.
Ny takelaka manaraka dia ny takelaka afovoany izay vera manalehibe izay azoko antoka fa ho fantatry ny ankamaroanareo ny momba ny asan'ny fikarohana. Azonao atao ny miditra ao amin'ny bara fikarohana eto ary hikaroka olona na lalao amin'izao fotoana izao. Ny safidy ambony indrindra dia olona sy lalao fotsiny no raisina ary misy ny safidy ambony indrindra amin'izany fikarohana izany amin'ny fijerena azy ireo miaraka.
Azonao atao koa ny manindry ny olona na ny lalao ary mijery azy ireo amin'ny ambaratonga lehibe kokoa. Izy ireo dia manana safidy fanampiny mitovy amin'izay azonao avy amin'ireo takelaka hafa rehefa tsindrio azy ireo. Zavatra kely tsotra eto raha hitsambikina mankany amin'ny tranomboky isika.
Ary ao amin'ny vakizoro fitahirizam-boky dia manana sary sy konsoly isika izao. Hanomboka amin'ny fakana sary aloha isika. Mora izany.
Azonao atao ny mahita eto fa nampakariko tao amin'ny Xbox Live ireo sary nalaina tamiko. Rehefa milalao lalao sy mirakitra zavatra iray aho, na ny pikantsary na ny lahatsoratra 30 segondra rehefa nakarina tao amin'ny Xbox Live mifototra amin'ny fipetrako dia mahazo fampandrenesana amin'ny findaiko aho mampahafantatra ahy fa vonona ny hivoaka izy io. Rehefa tsindrio io dia manana safidy hitahiry azy mivantana amin'ny findaiko aho na afaka mametaka ny bokotra 'Hizara' etsy ambany ary eto aho manana Xbox izay azoko ampiasaina hampiasaiko ny sakafoko.
overlay lalao skype
Afaka mandefa hafatra eto ambany aho na misafidy namana iray vao tsy ela akory izay. Azoko atao ihany koa ny manindry ny ellipses raha mila safidy misaraka. Hisintona ny fisie amin'ny findaiko ity ary omena safidy hizara azy aho.
Na Dropbox, na hafatra mailaka, na OneDrive na Twitter, amin'ny ankapobeny fampiharana izay afaka mizara haino aman-jery izay misy amin'ny telefaoninao, ireto safidy ireto dia haseho eto noho izany manana konsolosy mampiseho ny konsolako aho ary afaka mifandray amin'izy ireo aho hilalao lavitra . Hodinihintsika amin'ny lahatsoratra iray hafa izany. Afaka mitantana azy ireo koa aho, midika izany fa afaka mahita sy mahita izay napetraka aho ary mamafa ireo habaka na ahazoana antoka fa misy zavatra alaina eo amin'ny farany ankavanan'ny dia sary fanaraha-maso lavitra.
Manantena aho fa mipetraka ianao; Fanatsarana LEHIBE ity. Rehefa manindry azy aho dia miverina amin'ny console farany nifandraisako. Manana safidy hifandray amin'ny console hafa aho raha tiako ho hitanao izany.
Nosoratako eto ireo konsolako hafa azoko atao ny manova azy, mampiseho ahy ny toe-javatra ankehitriny. Efa miandry ny studio-ko. Tsy mandeha izao, fa manana safidy eto aho handrehitra ny console.
Ary miaraka amin'ity fahalalako fahalalana ity hoe iza marina no hofeheziko sy hahafahako mifamadika eo anelanelan'izy ireo dia traikefa tsara lavitra noho ny teo aloha. Ary farany, nanangana console vaovao ho an'ity kiheba ity izahay. Tena ilaina izany rehefa mahazo ny Xbox vaovao ianao, na Xbox vaovao izany dia andian-tantara avy amin'ny Sor X.
Afaka miditra eto ianao ary manangana ny console mandritra ny andro iray vaovao farany ary zavatra hafa dia hamela anao hanafaingana ity fomba ity. Fanampin'izay, tsy mila manorata ianao vao manandrana mampiasa ny lalao kilalao lalao miaraka amin'ny mpanara-maso. Hanamora kokoa azy io ary angamba horesahintsika amin'ny lahatsoratra iray hafa izany rehefa nanangana ny Series X aho ho marin-toetra.
Fa fantaro fotsiny fa eo izy ary tena hahasoa azy. Ary farany manana ny mombamomba antsika izahay, izay hitanao eto dia mitondra ahy mivantana amin'ireo asongadiko aho. Tahaka izany ny endriny rehefa nitendry ny namako aho.
Eo ambanin'ny gamertag-nao sy izay ataoko dia misy safidy iray handeha ivelan'ny Internet na hiseho amin'ny Internet ary azonao atao ny mametraka an'io toe-javatra io ary hiara-hirafaingoa amin'ny satananao amin'ny Xbox One na Series X anao koa rehefa miditra ianao. Etsy ambany izay misy fisongadinana toy ny hitantsika teo aloha karazana ny rohy mitovy hitanao teo amin'ny pejy fandraisana. Azoko atao ny manindry an'ireo sy mitantana azy ireo amin'ny alàlan'ny fampidinana azy ireo amin'ny console sy ny toy izany.
Eto ambany eto dia manana ny bio aho ary manana ny naotin'ny mpilalao namako izay tsy hita ireo mari-pamantarana, saingy efa indroa aho no nilaza izany, heveriko fa beta io ka mety hiova ny sasany amin'ireo zavatra ireo alohan'ny hamoahana azy ireo tanteraka. Farany, azonao atao ny manindry ny kisary gear eo an-tampony ho an'ny toe-javatra mombamomba anao, izay mitondra anao any amin'ny toerana misy anao manokana izay hitanao amin'ny tranokala sy fampiharana Microsoft hafa, ary amin'ny ankapobeny dia heveriko fa fanatsarana lehibe kokoa noho izay Efa nampiasaina teto tamin'ny iPhone sy ny Android teo aloha aho nefa tsy tao amin'ny Xbox anao ary henonao ny famoahana lalao vaovao na misy zavatra ambara amin'ny Game Pass ary tianao ho azo antoka fa misy izany rehefa mody ianao. Ity fampiharana ity dia manamora ny fanaovana izany.
Mazava ho azy fa afaka mampiasa ny remote control ianao. Milalaova amin'ny console anao miaraka amin'ny mpanara-maso toy ity, tena tiako ny Razer Kishi. Tsy tokony ho olana amin'ny fihazonana ny lozam-pifamoivoizana amin'ny lalao ankafiziko sasany na mitsangatsangana fotsiny mandritra ny fotoana fohy aho dia hanao an'ity lahatsoratra ity.
Manantena aho fa nankafizinao izany, antenaiko fa misintona anao ianao ary mamela ny fanehoan-kevitrao sy ny zavatra rehetra eto ambany, liana aho amin'izay eritreritrareo rehetra Fantatro fa misy zavatra tsy ampy nefa matoky aho fa hanampy amin'ny ho avy. Mbola hanolotra an'ity aho raha mila hevitra fa toa mbola ho avy ny sasany amin'ireny.
Rehefa mijery ny beta voalohany aho dia heveriko fa fototra mafy orina hanorenako ny taranaka ho avy sy ny fomba itanan'ity fampiharana ity ny zava-drehetra satria ny findaiko dia elixir ny fiainana, satria azoko antoka fa ho anao rehetra koa , ka mahafinaritra ny mahita fa omena saina ny fidirana eto. Hanao izany ho ahy aho ka hamintina an'ity izahay, misaotra anao rehetra nahita fa nankasitraka ny fanohananareo rehetra aho ary tsy afaka misaotra betsaka ry zalahy. Ho tratrariko daholo ianareo ao amin'ny lahatsoratra manaraka na hikorontana Twitter, na ahoana na ahoana.
Mijanona tsara hatrany, mifandraisa tsara ary ho hitako ny manaraka.
Inona no dikan'ny Gamerscore?
nyGamerscoredia fomba haingana sy mora hijerena ny asanao lalao, na sakaizanao amin'ny indray mipi-maso. Tsy mamerina intsony izy io - ireo zava-bita nosokafanao ho an'ny Madden NFL 07 dia hampifandraisina mandrakizay amin'ny anaoGamerscoreraha tsy misafidy ny hanao kaonty Xbox Live vaovao ianao.15 martsa 2021
“Hey, manana fanontaniana liana aho, manana fanontaniana ho anao aho. Vonona ny hampiaraka amiko ve ianao? '' Um ...
Tsy azoko atao '' Ahoana raha nolazaiko taminao fa manana mpilalao an-tapitrisany mahery aho? 'Oooh, tsy vitako izany, na eo aza ny namako rehetra, ny ray aman-dreniko ary ny sakaizako ho avy dia mihevitra fa tena zava-dehibe ny fahombiazana, betsaka noho ny noeritreretinao izany, ary porofo velona an'izany aho. Nahazo ny anaram-boninahitra 'Master' aho tamin'ny 2015 mifototra amin'ny Gamercorecore ahy, izay midika fa eny, nandefa Xbox One niaraka tamiko Kinect tamin'ny andro famotsorana ianao - maimaim-poana. Ity no sariko raha ny fahitako azy, io no iray amin'ireo andro sambatra indrindra tamin'ny fiainako.
Eto isika 6 taona aty aoriana ary mbola mampiasa an'io zavatra io foana aho, miaraka amin'ny $ 500 izay tsy notehiriziko satria tsy maintsy nividy an'io aho, dia nahazo PS4 aho. Tany am-piandohana, ny fahombiazana dia tena ratsy ary koa konsep mahafinaritra toy izany. Ankehitriny aho efa maro tamin'ny farany fa marina tsara mampiseho ny habetsaky ny fahaiza-manao sy ny fanoloran-tena aho mitendry.
Isa izay manaraka ahy amin'ny lalao rehetra nataoko. Izao ve ny zava-misy nahavitako ny Call of Duty 2 amin'ny Veteran Mode hitan'ny rehetra amin'ny Internet? Oh, inona ity? Ankehitriny ny zazavavy rehetra ao an-tanàna dia mahalala fa nanokatra ny zava-bita rehetra isaky ny lalao Dark Souls aho? Inona no tsy fitiavana? Ary velona ny olona, ​​voahidy aho! Angamba mpidoroka kely loatra ...
Ny famohana zava-bita dia mpidoroka - mpidoroka toy ny sigara sigara, tsy afaka ary tsy hiala aho! Ity misy torohevitra kely pro, azonao atao ny mahazo otrikaina bebe kokoa amin'ny sigaranao raha mihinana azy io amin'ny orony ianao. Raha mieritreritra aho fa toy ny mpikomy ankehitriny, dia tokony ho nahita ahy zazakely ianao rehefa nandao ny sekoly hilalao Hexic, Kameo, ary PGR 3 toy ny badass tena izy. Nanantona duvette teo ambonin'ny tolam-baravarako tamin'ny 1 maraina aho tamin'ny alim-pianarana ka tsy hitan'ny dadako ilay jiro nivoaka tamin'ny fahitalavitra raha mbola nilalao Perfect Dark Zero aho.
Nihena ny naotiko, saingy efa niakatra ny lalaojarako. Raha nampihatra ny zava-bitan'izy ireo tao amin'ny rafitry ny sekolin'i Washoe County izy ireo, dia nanana an'i A fotsiny ... fa tsy nanana kosa aho, dia nanao gay A fa ... fantatra koa amin'ny hoe 'Ds'.
Rehefa nandeha ny fotoana dia hita fa nisy lesoka nandritra ny tontolon'ny zava-bita. Ny zavatra heveriko fa nanimba ny zava-bita indrindra nandritra ny vanim-potoana 360 dia ny studio fampandrosoana. Ny ankamaroan'ny mpamorona dia tena tsy nahalala izay hatao amin'ny fahombiazana.
Etsy andaniny, misy lalao toy ny Airbender farany ahafahanao mahazo ny isa rehetra ho an'ny mpilalao ao anatin'ny 3 minitra ao anatin'ny 3 minitra amin'ny fanindriana ny bokotra B ho an'ny combo 50 voadona, ary ireo lalao toa an'i King Kong dia tsy nanampy be loatra koa, satria eto ianao dia afaka mahazo ny GS 1.000 amin'ny alàlan'ny famonoana ilay tantara fohy sy tsotra fotsiny. Ny lalao toa an'ity dia somary tsy fahita firy tamin'izany fotoana izany, saingy mbola nanala ny vidin'ny mpilalao tamin'ny ankapobeny izy ireo satria afaka nampisondrotra ny isa anao saika tsy nisy ezaka ianao. Ary amin'ny lafiny hafa, nanana zavatra toy ny GRAW ianao izay nanana fampisehoana nitakiana anao hahazo ny toerana voalohany eo amin'ny leaderboard, izay midika fa tsy maintsy mpilalao ara-bakiteny tsara indrindra eran'izao tontolo izao ianao Tom Clancy mba hahazoanao azy.
Raha mitady hahatratra an'ity zava-bita androany ity ianao dia vinavinaina fa hahatratra 4000 ora ny asanao be atao sy be atao hanokatra azy io. Iza no maniry izany? Avy eo dia be loatra ny zava-bita izay mitaky anao hanao asa manova saina, toy ny fanangonana ny bolongana maitso tsirairay ao amin'ny bemidina. Ary Famoretana dia be mahafinaritra sy ny fanangonana bala amin'ny alalan'ny gameplay voajanahary dia tena fahafaham-po. fa ireo izay ao an-tsainy marina dia te hanana mpitari-dalana amin'ny alàlan'ny findainy ary hanaraka azy ireo hatrany amin'ny tee mba hahazoana antoka fa tsy mahita bala iray ianao hahazoana antoka fa mipoitra ity Cheevo ity.
microsoft.com tsy mamaly
Rehefa avy nanao izany ny tenako dia afaka milaza aminao mialoha aho fa tsy mankaleo fotsiny ny fanatratrarana zava-bita toy izany, fa tsy misy dikany ihany koa satria rehefa nanangona 75% ny baolina maitso ianao, dia hanana hakingana faran'izay mahery ny toetranao. Izany dia nilaza fa tsy manana antony hanangonana ireo ambiny sisa amin'ny fomba fijery azo ampiharina ianao izao, ny tsy fisiana dia mahatonga azy io ho volavolan-kevitra mandreraka. Ity zava-bita ity izao dia hitarika anao hilalao ny lalao amin'ny fomba azo inoana fa hisy fiantraikany amin'ny zavatra niainanao tamin'izany.
Miaraka amin'ny lalao sasany dia mbola ratsy kokoa aza, toy ny ao amin'ny Assassin's Creed 2, nisy zava-bita tamin'ny fahitana volom-borona 100 niparitaka nanerana ny sarintany, tsy nisy hevitra hitako fa namaha ny akanjo na zavatra hafa ianao? Tsy misy zava-dehibe. Ny tiako holazaina dia ny fanangonana zavatra hanangonana zavatra dia tsy mahafinaritra fotsiny ary fomba tena kamo mameno ny lalao lahatsoratra ary manandrana mampahatsiaro ny mpilalao toa nahavita azy. Mbola olana io anio, tiako holazaina, izay tena te hanangona ny banga rehetra ao amin'ilay prototypa, ny artifact Romana rehetra ao amin'ny Assassin's Creed Valhalla, dia mahita ny ampahany amin'ny sambon-danitra rehetra ao amin'ny GTA V, * tazomy ny log audio rehetra ao amin'ny WD Legion *, * na mahita azy ireo ny sary Deer rehetra ao amin'ny Far Cry New Dawnall momba an'io zavatra io dia mety mila miantso toro-lalana amin'ny mpanara-maso iray hafa ianao na manaraka fotsiny ireo fomba fijery eo amin'ny sarintaninao - asa be atao daholo izany, tsy hiantso azy ireo ho zava-bita aho, tiako ny antsoinao ho fandaniam-potoana io.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, ny zava-bita marolafy marobe toa ny 'filalaovana lalao MP1000 amin'ny MATAHOTRA' dia tsy misy dikany, fandaniam-potoana fotsiny io, azonao atao ny manolotra ara-bakiteny ilay mpanara-maso amin'ny namanao jamba ary na dia afaka mamoha azy aza izy amin'ny farany, ny hany ilaina dia Fotoana. Amin'ity tranga ity, iza no mametraka ny fanontaniana hoe inona no tena zava-bitao? Raha tsy izany, dia afaka mahita lalao manararaotra tanteraka ny zava-bita izay afaka manatsara lalao tsara kokoa ianao. Ny fitafiana ny gnome zaridaina mandritra ny fampielezan-kevitra Half Life 2 Episode 2 dia namerina namerina ny zava-bitako faharoa tamin'ny lalao.
Ny fananana barazy iray ihany avy amin'ny fanombohan'ny asa fitoriana hatramin'ny faran'ny asa fitoriana amin'ny Modern Warfare dia nanome ahy antony hamerenana ny ambaratonga izay tsy ho noveriko mihitsy raha nanetsiketsika kely ny zavatra. Ny famonoana ny fahavalo 4 nifandimby niaraka tamin'ny bala Discord ho fanaraha-maso dia nanery ahy hanana tony sy ho lasa iray amin'i Zenyatta - toetra izay tsy noraharahiako tanteraka tamin'ny toe-javatra mahazatra. Mba hahatratrarana izany dia tsy maintsy naka fomba filalaovana izay lavitra ny faritry ny fampiononako aho, saingy nahatonga ahy ho mpilalao tsara kokoa izany amin'ny lasa ary Zenyatta no lasa mpilalao lehibe indrindra tamin'iny lalao iny.
Ny zava-bita vita tsara araka ny tokony ho izy dia afaka manome ny mpilalao antony matotra hijerena ireo singa amin'ny lalao lahatsoratra iray izay tsy noraharahiany raha tsy izany, dia afaka manampy sanda famerenana amin'ny alàlan'ny fitakiana ny fahalavorariana, toy ny ao amin'ny Mirror's Edge, na amin'ny fanerena ireo mpilalao ga hametraka baolina fotsiny ao amin'ny Firing ny playthrough ny Half-Life Episode 1 na amin'ny alàlan'ny famporisihana ny mpilalao handefa bala latsaky ny 500 mandritra ny playthrough manontolo an'ny FEAR 1, ny zava-bita sasany dia mety hahatonga anao ho mpilalao tsaratsara kokoa amin'ny alàlan'ny fanamby anao handray fahavoazana aotra amin'ny alàlan'ny adin'ny sefo iray amin'ny MGR: Valifaty amin'ny maody sarotra. Tena toy izany ny fahombiazana! Tokony ho tanjona hanatsara ny kilalao fanampiny izay manery anao hieritreritra hafa momba ny lalao izy ireo ary hampirisika anao ho lasa mpilalao tsaratsara kokoa amin'ny fanaovana zavatra ivelan'ny faritra mampionona anao. Saingy ny lisitry ny fahombiazana toa an'ity dia tsy fahita firy.
Amin'ny fotoana sasany, ny ankamaroan'ny lisitra fahombiazana dia lasa katalaogin'ny fahatsiarovan-tena fotsiny izay andehanantsika lisitra faniriana feno fientanam-po hijerena izay rehetra azo angonina ao amin'ny sari-tany ary hamono fahavalo maromaro miaraka amin'ny fitaovam-piadiana iray, hisambotra isan'ny loha-loha na mibanjina tarehy mitsiky eo ambony vatolampy. Raha tsapanao fa mamita ny lisitry ny zavatra tokony hatao izahay, dia tena afaka manala ny mahafinaritra rehetra amin'ny lalao, mamela tsiro mangidy eo am-bavanao, ary manao ny dingana rehetra ho asa bebe kokoa noho ny fialamboly. Izay nanomboka ho foto-kevitra tena mahafinaritra dia nanjary zava-baovao satria ny ankamaroan'ny mpamorona dia tsy nahalala izay hatao aminy na tsy mahalala izay hatao aminy.
Na eo aza izany, ny zava-bita sy ny mpilalao dia tsy nivoatra mihitsy. Ny fanambarana sy ny fanombohana ny Xbox One dia tena nanimba ny marika Xbox tamin'ny lafiny maro, izay noresahina lava avokoa fa ny tsy noresahina dia ny fiatraikany vokany teo amin'ny fampisehoana. Miaraka amin'ny Xbox vaovao, nisy interface interface vaovao nipoitra - tamin'ny alàlan'ny fitantanana ratsy na fahadisoana fisainana tsotra: ny Gamerscore, ilay isa namboarinao nandritra ny 8 taona, dia tsy naseho tamim-pireharehana teo akaikin'ny sarin'ny piraofilinao intsony, fa ankehitriny nafenina, efa nanafina ianao mihady kely hahitana azy.
Avy eo MS nanaloka ny seho GS tamin'ny fanerena ny lalao tsirairay tao amin'ny Xbox Marketplace mba hanana mpilalao gamer farafahakeliny 1.000, ka mora loatra ny mampitombo ny gamer anao. Tamin'ny faran'ny vanim-potoana 360, ny lalao arcade nisaraka tamin'ny lalao AAA sy indie dia namela 400 GS farafahakeliny, saingy ankehitriny ao amin'ny Xbox One dia 400 no nopetahana tampoka hatramin'ny 1000 GS. tsy noraharahaina loatra tamin'ny tsenan'ny lalao indie - ny lalao izay tsy ampiarahin'izy ireo amin'ny 360 dia mamela 1.000 haingana sy haingana eto amin'ny Xbox One.
Gamerscore dia tsy mora velively akory, nisokatra ny vavahady ary tsy hanidy izany, ny fako henjana toa an'i Nut-Jitsu dia namela anao hahazo 1.000 Gamerscore tao anatin'ny 45 minitra, ny maherifo eran-tany Neogeo dia namela ny arivo feno tao anatin'ny 25 minitra fotsiny. , ny tsingerin'ny angovo dia mety ho vita ao anatin'ny 15 minitra fotsiny, -Misy lalao 100 fanampiny any izay ahafahanao mahazo ny arivo feno ao anatin'ny iray kely na latsaky ny 1 ora. Vao haingana aho no nanao riandrano tao amin'ny Twitch izay nanolorako ny tenako adiny 3 hahitako hoe ohatrinona ny mpilalao azoko tamin'izany fotoana izany. Koa satria nihatsara kely ny zava-nitranga nandritra ny taona maro, ny zava-bitao rehetra dia aseho amin'ny avonavona eo akaikin'ny pfp anao indray izao, misy ny fisarihana mpitarika izao izay tena milay ary mety hampirisika anao ihany koa hahazo gamepass ary hanandrana lalao vaovao ka ianao Afaka manandrana misambotra ny namanao noho ny zony mirehareha.
Rehefa manokatra zava-bita izay latsaky ny 10% -n'ny lohan'ny lalao lahatsoratra ianao dia mamoaka feo kely mahafatifaty. Na dia tsara daholo aza ireo fanampiana vaovao ireo, raha manontany ahy ianao dia tsy tara loatra, na tara loatra, ny ankamaroan'ny zava-bita dia tsy dia mahafa-po loatra intsony ny manenjika ary ny tontolo dia tototry ny be dia be fotsiny. Ny filokana, ny zava-misy tsotra dia ny zava-bita dia tsy dia manandanja loatra toy ny taloha ary tsy azoko antoka raha hanao izany indray izy ireo. Heveriko fa tapitra ny fotoanan'izy ireo tamin'ny masoandro, ary noho izany dia tsy nandany fotoana tamin'ny masoandro mihitsy aho.
Saingy tsara ny milaza ny marina, satria nanana fotoana nahafinaritra aho nanenjika ny fahombiazana tamin'izany ary tsy afaka maka na inona na inona hiala amiko izany. Goin for GamerScore dia namporisika ahy hahazo lalao izay tsy noeritreretiko velively. GamerScore manenjika ahy eo amin'ny fiainana izany hoe amin'ny fotoana tsy iray, dia namela ahy hanao mitovy amin'ny aterineto amin'ny alalan'ny boosting namana fotoam-pivoriana, namana izay nijanona tsy nivadika tamiko nandritra ny taona vitsivitsy, ary ny zava-bitany indrindra nanery ahy Playing lalao an'arivony, efa nilalao kilalao fako ratsy indrindra azo eritreretina aho, nilalao ny lalao lehibe indrindra hatramin'izay, ary ny zava-drehetra teo anelanelany.
mianjera tsy tapaka ny shockwave
Izay niasa tamin'ny fomba tsara indrindra, tiako ny hino fa ny fiainana ny lalao lahatsoratra amin'ny sakan-dàlana marobe toy izany dia nanampy ahy hanana maso mitsikera be kokoa - angamba fanakianana loatra indraindray. Ka inona no dikan'izany? Horonan-tsary? Idk, tsy maintsy nandeha nitady zavatra izay tao an-tsaiko nandritra ny roa taona aho ary afaka naneho fa manana fahombiazana mihoatra ny 10.000 aho, nahatratra zava-kendrena betsaka noho i Usain Bolt, Michael Phelps ary Serena Williams natambatra. Ie azo antoka, voatendry ho 20 Academy Awards i Meryl Streep, fa inona ny lalao maherifony? Eny, nieritreritra aho fa, ho hitantsika ny manaraka.
Misoratra anarana amin'ilay lahatsoratra, toy ny lahatsoratra ary mihevera ho tonga Patreon! Ny vola rehetra azoko miaraka aminy dia miverina miverina any amin'ny lakandrano, ahafahako mahazo fitaovana tsara kokoa, afaka mandany vola amin'ny gags, akanjo, toerana sns. Noho izany, raha te-hahita ny kalitaon'ny fantsona hitombo hatrany ianao, dia eritrereto ny fanampiana! Izao dia namaha ny zava-bita lehibe indrindra amin'izy rehetra ianao, vitanao hatramin'ny faran'ny lahatsoratra!
Ahoana ny fomba hanampiako zava-bita amin'ny lalao Xbox?
hametrakavaovaozava-bitanyamin'ny fanaovana izao manaraka izao:
Mizotra mankany amin'nyzava-bitafizarana ho an'ny lohateny, hita eo ambanin'ny Services>XboxLive>zava-bita.
Kitiho ny Vaovaozava-bitanybokotra ary fenoy ny takelaka. Vantany vao vita dia kitiho ny Save.
Haneho ny fomba fanovana ny zava-bitanao amin'izay tianao hatao aho ary hamatsy antoka fa manana mombamomba ny gamer ao aminy ianao, noho izany dia te hanao izany ianao ary avy eo eo ianao, dia te-hitondra ny fitadidianao miaraka aminao izao ary eo aho tsy azoko antoka raha efa nivoaka izy, te hitoetra ao amin'ny toeranao ny fahatsiarovana solosaina ianao ary hampidina ny rakitra ary hiverina aminao aho ary hiverina ho an'ny fizarana roa aho ary hampidina ireo zavatra roa ireo ao anaty mandresy archive, fantatrao raha afaka midina any amin'ny Internet aho ary mila mpiorina faravodilanitra sy mpikirakira profil, noho izany dia te hampahiratra ny masony ianao ary avy eo hadinoko ny mametraka ny fitaovako azafady, apetraho ny fitaovanao, ka ahy, Rehefa manoratra aho dia miteraka Noise hafahafa Ie, esory izany ary avy eo dia toy izany, ka te handeha amin'ny lalao ve ianao? e na Profiles dia ho hitanao ny puffle lalao iray tsindrio eo amboniny Exter rakitra ary ataovy ny endrika biraonao. Azo antoka izany OK, ka araraoty ny faravodilanitra, sokafy ny piraofilinao ary manana mpamoaka mombamomba anao ianao ka te hanokatra azy io ary te-ho any ianao e04 ary avy eo dia te handeha ianao hanana an'arivony maro amin'ireo, te-hahita lalao avo dia avo ianao eto ambany eto, tsy ho alika loatra aho ka ny baolina poobalong be hoy ny baolina lava aza ny ankamaroan'ny baolina lava hahafahanao mamoha azy ireo amin'ny Internet dia hampiseho ny kisary saingy mamporisika anao aho ny hanao an-tserasera satria ny ankamaroan'ny tsy manam-potoana fa raha te hanao an'io amin'ny Internet ianao dia mila mijery tena izy hatramin'ny nandalovanao farany ny lalao ka hataoko izany offline ary avy eo dia tsindrio ny tsipika 'Unlock All Laws' handamina ny zava-bitanao taorian'ny fampiasana ny unlock fa Norsu avy amin'ny Virgin Media raha manana an'ity famerenana iray ity ianao mba hahitanao lahatsoratra amin'ny youtube ny fomba famongorana azy ity mba tsy hataoko satria nandresy izy io ' t mandrara anao fa kilalao taloha izany ary raha misy izany fa raha te hanao maodely bebe kokoa ho an'ny 3 ianao dia manoro hevitra aho fa nandresy izy ireo Mandehana ry namako 2k9, zahao ireo zava-bita fa raha toa ka hatramin'ny K 11 na raha toa ka mw3a Black Ops 2 Black Ops tena mahery tokoa dia tsindrio fotsiny dia avy eo manana ny zava-drehetra aho ka mahavoa rakitra azafady ary azonao atao izany mankanesa any amin'ny faravodilanitra ary avy eo dia mahita mombamomba ny gamer ianao ary tsy maninona fa azonao averina izany - tsy maninona aho fa averina, averiko ihany raha sendra miakatra ianao mba hahafahanao mankany amin'ny fampirimana vaovao ary hamerina azy. fotsiny hanesorana mankanesa any amin'ny biraonao, ary modia any an vaovao fampirimana OK ary izany no marina raha toa ka misy zava-mitranga izany dia afaka fotsiny petaka fa indray sy redoit eny te-haka izay te-hamafa izany ary avy eo te-tarihiny sy ny hamotsotra an'io any amin'izay lazainy fa tsy misy atiny ary afindra soa aman-tsara ilay antony mampifamaly sexleave mankany amin'ny Ormatiso manaraka izay ho an'ny solo-sainanao na ny fampisehoana azy io dia izay no mahomby Ka hiverina any aminao aho Ho haingana dia haingana ho anao, mitomany miverena miverina avy hatrany, ka izay tianao hamerina anay amin'ny Xbox tianao holazaina dia ampidiro indray ny USB ary ampidiro aminay ny usb-nao b fitaovana iray ary avy eo mitsingevana dia tsy tianao ny mandeha ny mpilalaoo amin'ny lalao izay namboarinao fotsiny fa tsy te hiala amin'ny sekoly amin'ity coaching ity izay tsy te-handeha amin'ny lalao vao novidian'izy ireo izany ary ho 2k9 rehefa hitako fa mety efa nampitako azy tany amin'ny toerana tena tsy ahitana azy io, fa araka ny hitanao eto dia manana fitsaboana an'arivony aho, eny, ka manana ny fitsaboana rehetra aho ary ireto no handeha hampiasa azy ireo oh hamaha ary reharehako izany fa haiko italy ka 550 ao an-trano 100 homer na inona na inona izany grand pooba izany tsotra sy tsotra manantena aho fa nankafizinao ny antony lehibe nofaritana ho tafaverina aho amin'ny famolavolana lahatsoratra momba ny gameplay. ary milamina tsara fa manao ahoana ny tianao hisoratra anarana ary manantena ny hahita anao indray, lahatsoratra iray hafa ary misaotra anao nijery
Ahoana ny fomba itahirizanao ny sary Xbox One?
Hapetaka ny URL an'ny sary nalainao. Mikorisa mankany amin'ny faran'ny URL ary esory ity bitika ity: & amp; format = jpg & amp; h = 640 & amp; w = 1138. Hit Enter, Ny kinova avo lenta an'ny sary Xbox One zava-bita dia hisintona. Kitiho havanana ny sary, safidio ny Save as, ary safidio ny fampirimana tianao itahirizana ilay sary.
Firy ny kisarisary fahombiazana maimaimpoana?
Kitapo fahombiazana - sary masina 6 620 maimaim-poana 6.620 kisary fahombiazana. Sary kisary maimaimpoana maimaimpoana amin'ny SVG, PSD, PNG, EPS ary ICON FONT Misintona sary miiba 6,620 mahery amin'ny SVG, PSD, PNG, endrika EPS na toy ny webfonts.
Inona no dikan'ny hoe manana zava-bita amin'ny Xbox One?
Raha te-hampideradera ireo zava-bitanao Xbox One eo amin'ny birao Windows ianao ary amin'ny HD feno dia azonao atao tsara izany. Ny zava-bita amin'ny Xbox One dia valisoa omena ny mpampiasa rehefa nahavita hetsika sasany tao anaty lalao na fampiharana iray aza.
Aiza no ahitako ireo zava-bitako Xbox Live?
Toy izao ny fomba: Sokafy ny tranokalanao (oh: Microsoft Edge), tsidiho ny Xbox.com. Midira-in amin'ny Xbox Live tantara. Ao amin'ny piraofilinao, tsindrio ny zava-bita. Tsindrio izay lalao na fampiharana tianao. Tsindrio izay zava-bita tsy voahidy.